Kismaayo News » Fawsiya oo la kulantey dhiggeeda Kenya iyo Raila Odinga
Fawsiya oo la kulantey dhiggeeda Kenya iyo Raila Odinga
Kn:Wasiirka arimaha dibadda ahna Kuxigeenka R/wasaaraha dalka Soomaaliya Fawziya Xaaji Yuusuf Aadan ayaa magaalada Nairobi kulan kula yeelatay Dhiggeeda Sum Ongeri iyo Raisul Wasaaraha dalkaasi Raila Odinga. Madaxda labada dal ayaa sida lagu wado kawada hadashey xiriirka labada dad iyo dal iyo arimo ay ugu muhiimsanyihiin sidii loo dajin lahaa xiisadda ka dhex aloosan iyo madmadowga soo kala dhex galay.
Fawsiya ayaa la fahamsanyahay inay ceelalyo u ahayd madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud oo la filayo inuu soo gaaro Kenya kadib marka uu soo gunaanado safarka uu ku bixiyay qaar kamid ah dalka ku yaala geeska Afrika.
Xiriirka labada dal oo hoos u sii socdey labadii sano ee ugu danbaysay ayaa waxaa loo tiirinayaa inay salka ku hayso is maandhaaf ka dhashay arimaha jubbooyinka iyadoo madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu isku taxalujinayo sidii talada arimaha maamul u samaynta Jubbooyinka loogu wareejin lahaa.
Wasiiradda Fawsiya oo saxaafadda la hadashey ayaa sheegtey in kulankan dhexmaray labada dawladood ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo xasaasi ah ayna isku afgarteen si wanaagsanna loosoo dhaweeyey iyadoo inshaartey in madaxweynuhuna kusoo biiri doono.